काठमाडौं – डा. का’नुनविद् एवं विश्लेषक प्राडा युवराज सँग्रौलाले नेपालको रा,जनीतिको फो,होरी खेलमा खेल्ने अ,धिकार भारतीय सञ्चार माध्यमलाई नरहेको टि,प्पणी गरेका छन् । नेपाल एउटा स्वतन्त्र रा,ष्ट्र भएको र उसलाई आफ्नो सी,मानाको र,क्षा गर्ने अधिकार छ भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा नेपालको प्रधानमन्त्री र कु,टनैतिक सबन्ध भएको देश चीनकी राजदूतको भेटघाटलाई जुन तरिकाले प्रस्तुत गरियो, यो भारतीय सरकारको ला,चारी भएको बताएका छन् । सँग्रौलाले बुँदागतरुपमा यस विषयलाई यसरी टिप्पणी गरेका छन्
१) २०० बर्ष बेलायतले लु’ट्यो, अ,पमान गर्यो, तर भारतीयहरुलाई त्यसको अ’पमान महसुस छैन् ।२) एक पटक चीनसँग यु’द्ध भयो, सधैं श’त्रुता हुन्छ ? दुर्इ सय वर्ष उपनिबेश बनाउने मित्र हुन्छ ?सी,माना जोडिएको देश स’त्रु हुन्छ ?
४) सी,मानामा प्रमाण पुर्याउन नसक्ने भएपछि, प्रोपोगन्डा वारमा भारत लागेको छ । भाततीय संचार माध्यम ट्र्म्पको र,णनीतिलाई चीनका बि’रुद्ध प्रयोग गर्दैछन। भारतले एसियासँग बस्न सिकेन भने, उस्को दु,र्दशा हुने छ। भित्र पसेर दुनियाँ बुझ्नु आवश्यक छ । भारत अमेरिकी चालको गोटि बनेको छ । नेपालमाथि पश्चिमी र,णनीति र तिब्बती मु’द्दालाई उठाउन चीनलाई बि’बादमा ल्याउने र,णनीतिको राम्रो हुँदै छ । तर भारतीय रबैया यही हो भने अब यस्कावि’रुद्ध ल’ड्नुपर्ने हुन्छ । एनजीओ चलाएर बसेकालाई यस घट’नाले किन छोएन ? यसैबाट थाह हुँदैन र ? भारत एक्लै नेपालमाथि प्र’हार गरि रहेको छैन । आँट पुग्छ, भने भारतले ना,काब’न्दी गरोस् । हामीले अब स्वतन्त्र बाँच्न सिक्नै पर्छ ।जस्ताको तेस्तै स्टाटस
Previous ओलीलाई ५ वर्ष सरकार चलाउन दिने हो भने चुनावमा नेकपा स,खाप हुन्छः झलनाथ…हेर्नुहोस!
Next खुसिको खबर,अब सरकारले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्ने सक्दो सेयर गरौ।